Dagaallo iyo Qaraxyo Ka Dhacay Deegaan Dhanka Waqooyi Uga Beegan Degmada Mahadaay Sh/dhexe.
Sidoo Kale cutubyo katirsan ciidamada shisheeyaha AMISOM ayaa qeyb ka ah duullaanka lagu qaaday deegaan dhanka waqooyiga uga beegan degmadaasi.
Wararka ka imaanaya deegaanka Cali-Fooldheere oo dhanka Waqooyi Uga beegan degmada Mahadaay ayaa sheegaya in dagaallo culus ay markale ka dhaceen deegaanka oo 3 maalmood ka hor ay gaareen ciidamo Mareykan iyo AMISOM ah.
Saaka aroortii ayaa qaraxyo laga maqlay deegaanka waxaana xigay iska hor'imaad xooggan balse dadka deegaaka waxay sheegeen in maanta dhor mar leysku noq noqday oo dagaalladu ahaayeen kuwa saacado badan qaatay.
Maanta barqadii ayay dagaallo culus ku dhaxmareen ciidamada Al Shabaab iyo Huwanta dhulka howdka ah ee Kala Bara Cali-Fooldheere iyo Mahadaay, ilo wareedyo ayaa sheegaya in ugu yaraan 3 askari laga dilay ciidamada Burundi ee qeybta ka ah soo duulayaasha shisheeye.
Warar kale ayaa sheegaya in ciidamada huwanta ah ay Meydadka Askar uga carareen goobta dagaalka dhaawaca ciidanka cadowga gaaray ayaa lagu sheegay todobo askari , gelinkii dambe ee maalintii Jimcaha ayay deegaanka gaareen saraakiil Mareykan ah oo wata 4 gaari oo nuuca qafilan ah iyo Boqolaal ciidamo Afrikaan ah oo dusha sare ay ka waardiyaynayaan diyaarado dagaalka balse maanta ayay la kulmeen iska caabin adag.
Dhinaca kale maanta gelinkii dambe ayay dagaallo culus ka dhaceen duleedka Cali Fooldheere,warar madax banaan ayaa sheegaya in gaadiid gaashaaman laga gubay ciidamada Burundi islamarkaana dhimashadoodu gaartay 6 askari, balse illaa iyo hadda wax war ah kamasoo bixin dhinacyada ku dagaallamaya waqooyiga Sh/dhexe.